Golaha Dhalinta Maqaabul ayaa soo dhaweeyay hadal ka soo yeedhay xildhibaan Jubaland ka tirsan | BuhodlePost.com
Golaha Dhalinta Maqaabul ayaa soo dhaweeyay hadal ka soo yeedhay xildhibaan Jubaland ka tirsan
Kismaayo, Soomaaliya —Golaha Dhalinta Maqaabul ayaa Jimcaddii soo dhaweeyay hadal ka soo yeedhay xildhibaan Jubaland ka tirsan oo qoraa arrimaha gobalka kaga faallooda baraha bulshada ku tilmaamay wadani mudan in lagu abaalmariyo hawlihiisa shaqo.
“Hadaanahay masuuliyiinta Jubaland waa in aan ku abaalmarinaa dadaalkiisa wadaniyadda ku dheehan oo uu marwalba nala garabtaaganyahay Mudane Geljire,” ayuu yidhi Xildhibaan Maxamed Janagale.
Agaasimaha Xidhiidhka Dadweynaha iyo Isgaarsiinta ee Golaha Dhalinyarada Maqaabul masuul la shaqeeya oo codsaday in aan magaciisa la xusin ayaa hadalka Xildhibaan Maxamed Janagale ku sheegay mid, “Maskax-caafimaad qabta ka soo baxay”.
Cabdi Qawle waa nin ka mid ah mas’uuliyiinta Waaxda Socdaalka & Jinsiyadaha Dowlad Gobaleedka Soomaaliyeed ee Jubaland.
Agaasimaha ayaa yidhi, “Dadweynaha Maqaabul Ogaadeen ee qaranka Soomaaliyeed siyaabo badan ayay saameyn ugu lahaayeen Geeska Afrika waxa ayna ka mid yihiin bulshada ugu firfircoon, marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda gobalka Jigjiga, Kismaayo ilaa Gaarisa.”
“Khalad siyaasadeed oo aad u weyn ayuu M/weyne Axmed Maxamed Islaam-ka Jubaland ka galay Maqaabul, taasna waa khaladaad dhanka Maqaabul ka yimid darteed,” ayuu yidhi masuulkan u hadlay Golaha Dhalinta Maqaabul, isaga oo wax sharraxaad ah ka bixin khaladka siyaasadeed waxa uu yahay.
Mar aan wax ka weydiinay shakhsiyaadka, iyaga oo magacii dadka Maqaabul kursiga ay ku fadhiyaan ama iska dhigaya in ay matalaan, kaliya dantooda gaarka ah ku hawlan ama kala xaajoonaya madaxda kale dan-gaar u ah ayaa waxa uu ku jawaabay:
“Nagu la qabiil ma ah qof muduci ku ah hab nolaleedkii laga soo gaadhay awoowayaashano,marna kama ogolaandoono in qaab shakhsi ahaaneed nalagu la dhaqmo annaga oo maqaabul ah, badalkii dadweyne ballaadhan oo dad iyo deegaanba leh.”
“Ma dooneyno in aan colaad u muujino cidna; haseyeeshe, kama tanaasuleyno xaqa aan u leenahay in ay dhalinteenu ku lahaadaan qeyb fursadaha shaqo iyo mixnadaha waxbarasho ee soo baxa, si la mid ah Soomaalida kale,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Si kasta ba ha ahaatee, dhaqdhaqaaqa iyo kulamada ay yeelanayaan Golaha Dhalinta Maqaabul ayaa loo arkaa in ay yihiin siyaabaha loo xoojin karo midnimada iyo soo afjaridda kala qeybsanaantii dadweynaha Maqaabul ee ku kala nool saddex dal oo Geeska Afrika ku yaal.